Tsapan'i Shina Sintered ny famokarana sy ny orinasa | Zhengyuan
1. Fahaiza-miasa lehibe, marina ny fanivanana, fihenan'ny tsindry ary fiatoana fanoloana lava;
2. Ny porosy avo sy ny fihanaky ny rano tsara, ny fahazoana tsindry kely ary ny fandehanana lehibe;
3. Ny fanoherana ny korontana sy ny fanoherana ny hafanana avo: mahatohitra ny fahalavan'ny asidra, alkali, solon'ny organika, fanafody, sns, izay azo ampiasaina amin'ny tontolo 480 for mandritra ny fotoana maharitra;
4. Mora hatao, mamolavola ary manamboatra;
5. Araka ny takian'ny mpampiasa dia afaka mamokatra manokana vatan-kavoana, matevina, fanamafisana ary fanondroana manokana isika;
Ny tsiranoka vy tsy miovaova dia tsapa fa manana fampisehoana filtration tena tsara, ary fitaovana fanivanana mety amin'ny fanoherana ny mari-pana, ny fanoherana ny fanapahana ary ny fametrahana azy tsara. Izy io dia ampiasaina betsaka amin'ny fametrahana polimerimia, indostrian'ny solika, ny fitrandrahana solika avo lenta amin'ny elektronika, ny fanalefahana ny famolavolana solika, ny filtran'ny viscose, ny filamandrana mialoha ny endriny, ny sivana vovoka miaro, ny vatan'ny sivana, ny fanivanana ny membrane, ny mpandrafitra, ny kitapom-bolan'ny fiara, ny fiaramanidina ary ny sambo ary ny hafa fametrahana menaka solika, filtration rafitra hydraulic.
Haben'ny fenitra: 1000 × 500mm 1000 × 600mm 1000 × 1000mm 1200 × 1000mm 1500 × 1200mm
Fitaovana fenitra: 316L
Ny refy ao amin'ny laharana etsy ambony dia azo atao mifanaraka amin'ny takian'ny mpampiasa.
Product specificationμm (c)
Famoronana araka ny marina
Fahazoan-dàlana feno loto
Ny lanja fototra
1. Ny fandrefesana ny fampandrindrana ny filtana sy ny fahafahan'ny mandray fandotoana dia tokony hatao mifanaraka amin'ny fepetra omen'ny GB / t18853-2002.
2. Ny tsindry boribory dia tokony ho refesina araka ny fepetra amin'ny GB / t5249.
3. Ny mari-pandrefesana ny rivotra dia azo refesina arakaraka ny fepetra omen'ny GB / t5453, ny fahasamihanan'ny tsindry dia 200Pa, ary ny rivotra kosa ny rivotra.
4. Ny tanjaky ny fracture dia faritana araka ny fepetra arahin'ny GB / t228.
Previous: Nahatsapa ny fanodinkodinana fiarovana net
Manaraka: Fantsona vita amin'ny aluminiana ferro